Nasaina namotsotra ireo gadra 21 nanohitra ny lalànam-pifidianana “manavakavaka” i Qatar · Global Voices teny Malagasy
Miteraka adihevitra ny fifidianana Voalohany ny Shura
Voadika ny 12 Oktobra 2021 16:53 GMT
Iray amin'ireo voasambotra i Hazzaa Almurra PhD, ary nitarika ny fanentanana ny fihetsiketsehana manohitra ny lalàm-pifidianana sy izay nofaritany ho “mahaolom-pirenena tsy feno” ananany sy ny havany. Niseho tamina horonantsary mihantsy ny Emira ao Qatar izy, ary nivoady hanohitra ny fanavakavahana mandra-pahafatiny. Pikantsary avy amin'ny lahatsary navoaka tao amin'ity sioka ity.
Navoakan'ny Foiben'ny Zon'olombelona ho an'ny Helodrano (GCHR), fikambanana tsy miankina sy tsy mitady tombombarotra izay mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, ny fikambanana sy ny fivoriana milamina ao amin'ny faritra MENA tamin'ny 19 Septambra ity lahatsoratra ity. Navoaka eto indray ny endrika nasiam-panovana araka ny fifanarahana famoahana indray.
Niantso ny manampahefana Qatari hamotsotra ireo olom-pirenena 21 izay nogadraina tamin'ny fiandohan'ny volana septambra noho ny fanoherana am-pilaminana ireo lalàna nivoaka vao haingana izay mifehy ny fifidianana mpanao lalàna voalohany ao amin'ny fanjakana ny Foiben'ny Zon'olombelona ho an'ny Helodrano (GCHR) any Londra
Tamin'ny fanambarana navoaka tamin'ny 19 septambra, nanentana ny governemanta Qatari ny GCHR mba “hamotsotra avy hatrany ireo gadra rehetra mifandraika amin'ireo fihetsiketsehana am-pilaminana natao tato ho ato, sy ho fiarovana ny fahalalahan'ny vahoaka, indrindra ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahana hivory am-pilaminana.”
Niantso an'i Doha ihany koa ny vondrona mba hanitsy ireo lalàna telo izay mifehy ny fifidianana filankevitra Shura voalohany any Qatar.
Tamin'ny 29 Jolay, nankatoa ny Lalàna Laharana (6) taona 2021 izay mifehy ireo dingana amin'ny fifidianana Filankevitra Shura izay tokony hatao amin'ny volana oktobra ny Emira any Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ka roa ampahatelon'ny seza miisa 54 ao amin'ny antenimiera no sambany ho fidiana amin'izany. Nanamafy ny Lalàna laharana (7) taona 2021 izay mamaritra ny fananganana ny filankevitra sy ny faritra misy azy ihany koa ny emira. Ankoatra izay, namoaka didim-panjakana laharana (37) taona 2021 izay mamaritra ireo fari-pifidianana 30 ao amin'ny Filan-kevitra Shura ny emira, ka mpikambana iray no hofidiana isaky ny fari-pifidianana amin'izany.
Hitan'ny GCHR, ny Human Rights Watch (HRW) sy ny hafa ho mametraka fanavakavahana miharihary eo amin'ny olom-pirenena Qatari ireo lalàna roa sy ny didim-panjakana mifandraika amin'izany, amin'ny fandàvana ny vondrona lehibe amin'izy ireo hanana zo hirotsaka hofidina na hanana zo hifidy, na izy roa, ary manilika tanteraka ireo vondrona hafa ao amin'ny fiarahamonina.
Araka ny tatitra navoakan'ny HRW tamin'ny 9 septambra, mandràra ireo Qatari izay voasokajy ho “nampidirina” fa tsy “teratany” amin'ny lalàna momba ny zom-pirenena mampiady hevitra ao amin'ny firenena tamin'ny taona 2005 tsy hilatsaka ho kandida ary mandràra azy ireo tsy hifidy ny lalana vaovao mifehy ny fifidianana.
Fihetsiketseham-bahoaka tsy mbola nisy toa izany
Niteraka hetsi-panoherana tsy fahita firy tany Qatar ny fankatoavana ireo lalàna ireo, ka mpikambana ao amin'ny foko Al-Murra no ankamaroan'ny nanao fihetsiketsehana, iray amin'ireo foko lehibe indrindra ao Qatar, izay lavina amin'ireo olona ao ny zo hirotsaka hofidiana, hifidy na izy roa.
Nangataka ny fivoriana milamina notontosain'ny foko Al-Murra tamin'ny 9 Aogositra fa tokony foanana ny lalàm-pifidianana ao amin'ny Filankevitra Shura, ary notinaky ny zo maha olom-pirenena feno, ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra, ary ny fampiroboroboana ny rariny ara-tsosialy eo amin'ireo olom-pirenena. Nitohy nandritra ny andro maromaro ny fihetsiketsehana.
Niezaka imbetsaka nanaparitaka izay lasa sit-in ireo mpitandro ny filaminana. Nanafika ny tranon'ireo mpikambana lehibe ao amin'ny foko koa izy ireo, ka olona am-polony tamin'izy ireo izay nitarika ny fihetsiketsehana sy nandray anjara tamin'izany no voasambotra.
Nogadraina ary tsy navela hifandray amin'ny fianakaviana
Araka ny filazan'ny GCHR, nanamafy ny loharanom-baovao azo itokisana avy any an-toerana fa nihoatra ny 50 ny isan'ireo voafonja avy amin'ity foko ity. Betsaka no navotsotra rehefa avy noterena hanasonia fianianana voasoratra fa tsy handray anjara amin'ny fihetsiketsehana intsony. Na izany aza, olona 21 no mbola any am-ponja ao amin'ny Sampam-piarovam-panjakana na any amin'ny paositry ny polisy, araka io loharanom-baovao io ihany. Tsy avelan'ny manampahefana mifandray amin'ny ankohonany na amin'ny mpisolovava azy izy ireo.
Anisan'ireo gadra avy ao amin'ny foko i Hazzaa bin Ali Abu Shraydeh, Dr. Rashid bin Ali Abu Shraydeh, Saeed Al Dajran, Jaber Abu Shaqla, Abdullah Al Alyan, sy ilay poeta poety Saleh Al Nusheira ary Ali bin Rashid Al Subaih Al-Marri.
Mpisolovava nitàna andraikitra lehibe tamin'ny fitarihana sy fanentanana ireo fihetsiketsehana ireo i Hazzaa bin Ali Al-Marri, PhD. Niseho tamina horonam-peo maromaro izy, izay nahitàna azy nanao antso avo tamin'ny Emir an'i Qatar ny iray tamin'izany, manao hoe:
Hangataka ny zonay sy ny fahamendrehanay eto amin'ity firenena ity sy avy ao anatiny izahay na dia voatendry ho faty any am-ponja aza.
Nampiasa ny kaontiny Twitter i Hazzaa mba hamoaka ny teniny mahitsy sy ny heviny mitsikera ny zava-mitranga any Qatar. Nanoratra izy tamin'ny 28 Jolay hoe:
Hatramin'ny namoahana ny lalàm-panorenana tao amin'ny Gazety Ofisialy ary niandry ny fanatanterahan'ny andrim-panjakana momba ny lalàm-panorenana izahay, nahemotra 15 taona mahery izany, ary nahemotra niaraka taminy ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana. Mivavaka izahay mba hitondra vaovao tsara ity fanemorana ity.
Nampandrenesina ny GCHR fa notendren'ireo mpanao fihetsiketsehana ho foiben'ny fivorian'izy ireo ny tranony ao amin'ny faritra Al-Muaither ao amin'ny Tanàna Al-Rayyan, 16,5 km miala ny renivohitra Doha.
“Mpifidy sy Kandidà nofantenina”
Ahitana seza 54 ny Filankevitra Shura hofidiana voalohany an'ny fanjakana, izay tokony hotontosaina amin'ny 2 Oktobra ary fehezin'ireto lalàna manavakavaka ireto.
Tamin'ny 15 septambra, nanambara ny Komity Mpanara-maso ny fifidianana Filankevitra Shura ao Qatar fa kandidà 294, avy amin'ny faritra 30 mahery manerana ny firenena no nanoratra ny firotsahany hofidina tao anatin'ny lisitry ny fifidianana savaranonando. Nanamafy ny tatitra voarain'ny GCHR fa noterena hiala ireo kandidà sasany noho ny fanerena avy amin'ny herin'ny governemanta matanjaka, ary ny sasany kosa nesorina tao anatin'ny rejistry ny kandidà.
Tamin'io andro io ihany, nisioka tamin'ireo mpanaraka azy miisa 23.000 i Mubaraka Al-Marri, olom-pirenena vehivavy Qatari:
Ry anadahiko sy rahavaviko ao amin'ny Fari-pifidianana (16), nesorina ny anarako nefa tsy fantatro ary tsy nampandrenesina akory tamin'izay fampiakarana raharaha aho, kanefa tsy nanala [ny firotsahako ho kandidà]. Hanatona ny Komitim-pifidianana aho mba hahafantatra ny anton'ny fanilihana [ahy].
Mandritra izany fotoana izany, maro ireo olom-pirenena niditra tao amin'ny Twitter mba hamaritra ny fifidianana ho avy ho toy ny hosoka tsy mahasolo tena ny vahoakan'i Qatar.
Mohammed Almarri nisioka hoe:
تأسيس #مجلس_الشورى_القطري وآلية انضمام جميع اعضاءه سواء بالتعيين او “بالانتخابات” ليس لها علاقة بالديمقراطية ، والسبب ان مُرشحي #انتخابات_مجلس_الشوري والناخبين تختارهم الحكومة بدون ادنى مبادئ العداله والمساواة ولا حتى المصلحه العامة!!!
Tsy misy ifandraisany amin'ny demaokrasia ny fametrahana ny Filankevitra Shura Qatari sy ny fomba hidirana ho mpikambana, na amin'ny alàlan'ny fanendrena na ‘fifidianana,’ ny antony dia ny governemanta ihany no nifidy ireo mpilatsaka hofidina ao amin'ny Filankevitra Shura sy ny mpifidy ary tsy misy na dia fitsipi-pahamarinana sy fitoviana, na koa tombontsoam-bahoaka na dia kely akory aza!!!